समाचार - एक लेजर काट्ने / कुँदिएका मेशीन खरीदको लागि सुझावहरू
चरण १: पहिलो मुद्दा समर्थन हो।
त्यहाँ ज्यादै सस्तो आयातहरू छन्, प्रायः चीनबाट, बजारमा। तर लेजरहरू जटिल मेसिनहरू हुन् र ती ब्रेक गर्छन् र मर्मत गर्न आवश्यक छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले किन्नुभएको कम्पनी भरपर्दो छ र तपाईंलाई र उनीहरूको मेशिनको लागि राम्रो समर्थन प्रस्ताव गर्दछ तपाईंले खरीद गर्नुभयो पछि।
यहाँ सोच्न को लागी केहि प्रश्नहरु छन्:
प्रतिस्थापन भागहरू प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो वा सजिलो छ?
के उनीहरूसँग टेक समर्थन छ?
प्रश्नको उत्तर पाउन कत्तिको सजिलो छ?
के उनीहरूसँग राम्रो वेबसाइट छ?
त्यहाँ कसरी मेशिन प्रयोग र / वा फिक्स गर्ने बारे ट्यूटोरियलहरू छन्?
के यो अपग्रेड गर्न सकिन्छ?
चरण २: एउटा मेसिन छनौट गर्दै। आकार र शक्ति।
दुई मुख्य मुद्दाहरूमा म ध्यान केन्द्रित गर्दछु जब यो मेसिन उठाउने आउँदछ, ओछ्यानको आकार र लेजरको शक्ति हो।
मेशिनको ओछ्यान आकारले निर्धारण गर्दछ कि कता वा कुँद्नको लागि तपाईं मेशिनमा कति फिट हुन सक्नुहुन्छ। ठूलो ओछ्यानले तपाईंलाई काट्न वा ठूला टुक्राहरू कोर्न अनुमति दिनेछ र यदि तपाईंको केहि सानो गरिरहेको छ भने पनि, लेजर कट गहना जस्ता, ठूलो ओछ्यानले एक पटकमा भन्दा एक पटकमा धेरै टुक्रा काट्न अनुमति दिन्छ। र केहि मेशिनहरूको एक निश्चित ओछ्यान छ र केहिसँग ओछ्यान छ जुन माथि र तल जान सकीन्छ। एउटा ओछ्यान जुन माथि र तल जान्छ तपाईंलाई विभिन्न आकारको वस्तुहरू खोल्न अनुमति दिन्छ। काटि depth्ग गहिराइ परिवर्तन हुँदैन तर यदि तपाईं छालाको जुत्तामा लोगो छाप्न चाहानुहुन्छ छालाको सपाट टुक्राको सट्टामा, ओछ्यान राख्नु जुन तपाईं मेशीनमा जुत्ता लिन कम गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को मुद्दा लेजरको पावर हो। लेजरको शक्ति वत्स मा मापन गरिएको छ। लेजर जति शक्तिशाली छ त्यति नै वाटै। लेजर, मैले प्रयोग गरेको, w० वाटको लेजरबाट सुरू गरेर 50० वाटमा अपग्रेड गरियो। लेजरको बल काट्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सामग्रीको मोटाई याद गर्नुहोस् जुन लेजरले काट्न सक्दछ यो लेन्सको केन्द्र बिन्दुद्वारा निर्धारण गरिन्छ न कि लेजरको शक्तिबाट। त्यसैले अधिक शक्तिशाली लेजर थपेमा तपाईं बाक्लो सामग्री काट्न सक्नुहुन्न। तर यसले तपाईंलाई छिटो र अधिक विश्वसनीय रूपमा काट्न अनुमति दिनेछ। कमजोर लेजरको अर्थ लेजरलाई राम्रो बनाउन मा ढिला बनाउनु हो।
म तपाईलाई सक्दो सब भन्दा ठूलो मेसिन प्राप्त गर्न र कमजोर लेजरबाट सुरू गर्न सुझाव दिन्छु। एउटा ठूलो ओछ्यानले तपाईंलाई ठूला डिजाइनहरूमा काम गर्न वा एकै पटकमा धेरै टुक्रा काट्न र खोप्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यसमा लेजर अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ अझ बढी शक्तिशालीमा पछि।